Kalandrie mockup | Creatives Online
Mihamaro hatrany ny zavatra ao an-tsaintsika: ny fotoana hitsaboana, ny hetsika hotanterahina, ny asa andavanandro, sns. Ary izany no mahatonga antsika mila mitondra fandaharam-potoana na, ohatra, kalandrie mockup.
fa, Kalandrie mockup inona? Inona no azony atao ho antsika? Manana asa ho an'ny tetikasan'ny mpamorona sary ve ianao? Raha manontany an'izany rehetra izany ianao dia ireto ny valiny.
2 Nahoana no mampiasa iray
3 Ahoana ny fomba hanaovana mockup kalandrie
4 Ohatra amin'ny mockups kalandrie
4.2 Elements Envato
4.4 Kalandrie birao
4.5 Kalandrie rindrina
4.6 Mockup kalandrie rindrina
4.7 Kalandrie klasika
Ny zavatra voalohany indrindra dia ny mahafantatra ny atao hoe mockup. Momba ny a photomontage izay ahafahan'ny mpamorona sary manambatra endrika iray. Ohatra, alaivo sary an-tsaina hoe manana endrika t-shirt nasain'ny mpanjifa ianao. Ary tianao ny hampiseho azy io endrika io araka izay azo atao. Saingy mazava ho azy, raha te hanao izany ianao dia tsy maintsy mandeha any amin'ny fivarotana iray izay anaovan'izy ireo t-shirt mahazatra, mandoa izany ary miandry azy ireo hanome anao. Ahoana raha tsy tianao ny famolavolana? Tsy maintsy miverina miasa ve ianao ary mampiasa vola vao mivoaka indray?
Mba hisorohana an'izany dia ampiasaina ny mockups satria azonao atao ny mampiasa sary semi-realistika momba ny endriky ny endrika amin'ny lobaka tena izy.
Afaka mieritreritra toy izany koa isika amin'ny fonon'ny boky, kahie, skateboard, sns. Ary, mazava ho azy, na dia ho an'ny kalandrie.
Nahoana no mampiasa iray
Ny mockup kalandrie dia manana fampiasana maro miankina amin'ny famolavolana azy. Alao sary an-tsaina, ohatra, ny kalandrie lehibe iray, ilay karazana mihantona eo amin’ny rindrina. Mety ho nisy mpanjifa naniraka anao hamolavola ny kalandrie homeny ny mpiasany sy ny mpanjifany ary mila anao izy ireo hanomana izany ho azy ireo.
Safidy hafa, kalandrie ahafahana manoratra ireo fanendrena sy hetsika manan-danja rehetra mba ho hita taratra tsara ny zava-drehetra ary mifanaraka amin'ny marika manokana na ny orinasa ihany koa (mba samy mampiasa ny rafitra iray ihany).
Araka ny hitanao dia azo atao izany ary ahafahanao manana a fifandanjana sy fifehezana amin’ny asa tokony hatao. Inona no dikan'izany? Fandaminana lehibe kokoa, tsy dia adin-tsaina ary fahafaham-po kokoa satria hitan'ilay olona ny fahafahany manatanteraka ny asa tsirairay nefa tsy manadino na inona na inona.
Ahoana ny fomba hanaovana mockup kalandrie
Tsy sarotra ny manao mockup kalandrie. Araka ny fantatrao, ny kalandrie dia misy 12 volana, izay mahazatra. Ankehitriny, miovaova ny endrika azon'ny mpanjifa angatahina. Ohatra:
Kalandrie ahitana ny 12 volana amin'ny takelaka iray ihany. Amin'ny ankapobeny, amin'ity tranga ity, ny mockup dia atao amin'ny endrika A3 mba handrakotra ny volana rehetra. Mety ho kely ihany ireo, saingy ampy ho hita mandritra ny andro sy volana tsy misy olana. Azo atao lehibe kokoa (toy ny A3 roa mitambatra) mba hampitombo ny habeny farany.
Kalandrie misy 3 volana. Ohatra, Janoary, Febroary, ary Martsa amin'ny takelaka iray; Aprily, Mey ary Jona amin'ny iray hafa, sns.
Kalandrie misy sary. Ny mahazatra indrindra dia ny maka sary isam-bolana, na dia tsy ampiasaina kokoa aza ireo ary ampiasaina amin'ny kalandrie firaisankina fotsiny satria ny ankamaroany dia misafidy sary tokana ary ny volana eo ambanin'ny die-cut mba handrovitra ny pejy rehefa mandeha ny volana. by.
Tsy maintsy mandray izany rehetra izany ve isika amin'ny famolavolana? Mazava ho azy fa tsy mitovy ny manao kalandrie iray pejy mihoatra ny roa ambin'ny folo miampy ny fonony.
Ny volana tsy dia sahirana loatra ianao amin'ny famolavolana, satria misy ny môdely, ary toy izany koa no mitranga amin'ny mockups kalandrie. Raha tsy te hanao azy ireo ianao, na tianao Mampiasà môdely hanovana azy araka izay tianao ary hiasa amin'ny endrikao miaraka amin'ny fototra, azonao atao ny manararaotra sy mampiasa azy.
Fa raha te hanao izany ny tenanao, dia tsy maintsy mandinika:
Ny sary na sary tokony hampiasainao.
Ny typography ny isa, fa koa ny lahatsoratra (satria ny orinasa sasany te-hampiditra ny anarany, tranonkala, sns).
Ny kalandrie (mora izany).
Tsy hisy afa-tsy fahaiza-mamorona kely sisa tavela miaraka amin'ireo fandaharan'asa fandrafetana sary handeha amin'ny takelaka isaky ny takelaka na lehibe miaraka amin'ny volana rehetra.
Ohatra amin'ny mockups kalandrie
Araka ny fantatsika fa ny fomba tsara indrindra hijerena hoe inona ny kalandrie mockups dia ny mampiseho anao ohatra, ireto misy pejy ahitanao mockups ary koa ny endrika sasany mety mahaliana, na eo amin'ny sehatra manokana / matihanina, ary koa ho an'ny mpanjifa.
Amin'ity tranga ity dia manana isika loharano mockup kalandrie 3000 mahery, ny sasany izay hanampy anay hampiseho amin'ny mpanjifa ny endrik'ireo kalandrie ary ny hafa izay afaka manampy anao hahita ny fomba hanangonana iray tahaka izao.
Amin'ity tranga ity dia tokony hotadidinao fa ny Ny ankamaroan'ny zavatra ho hitanao eto dia voaloa. Na dia izany aza, ny sasany dia tsy lafo loatra ary azonao atao ny mandinika azy ireo, indrindra raha manana mpanjifa manontany anao amin'ireo tetikasa ireo ianao satria fomba iray hanehoana azy ireo amin'ny fomba tena misy.
Pejy iray hafa hahitana ny mockups kalandrie dia ity. Raha ny marina, manana karazany maro ianao, na dia tena izy aza Tsy collage loatra fa vokatry ny niasa tamin'ny kalandrie.
Amin'ny maha fomba hevitra, dia afaka manompo anao.
Raha ny mpanjifanao, na ny tenanao, dia maniry ny kalandrie birao, ny karazana izay Mandalo ny kely sy ny volana rehefa mandalo ny raviny avy eo aloha mankany aorianaIty misy mockup izay hampiseho ny fonony sy ny sary anatiny sasany.
Amin'ity tranga ity, ity kalandrie ity dia miavaka satria, amin'ny takelaka tokana, manana telo volana ianao. Raha ny marina, raha ny zava-misy, dia mety hieritreritra isika fa ny mpanjifa dia hanaisotra ny telo volana amin'ny fotoana iray mba ahafahan'ny mpampiasa manala azy tsikelikely.
Ny ambadika dia ho sary iray izay handrakotra ny volana ihany koa.
Mockup kalandrie rindrina
Ny iray amin'ireo kalandrie rindrina dia ity iray ity. Amin'ity tranga ity dia ho roa volana amin'ny takelaka tsirairay ary miantehitra bebe kokoa amin'ny fisehon'ny lahatsoratra sy isa noho ny fampidirana sary.
Mila kalandrie mahazatra ve ianao? Amin'ireo izay nisy takelaka iray isam-bolana sy sary iray isaky ny tsirairay? Eny, ity misy mockup afaka manampy anao hampiseho izany amin'ny mpanjifanao.
Afaka mahazo ianao eto.
Araka ny hitanao dia misy fomba maro hanaovana mockups kalandrie, na isam-bolana na isam-bolana hanaovana izany. Iza amin'ireo no hofidinao hanehoana ny drafitrao amin'ny mpanjifanao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Kalandrie mockup